China Biotinoyl Tripeptide-1 factory na-emepụta | JYMed
Product aha: Biotinoyl tripeptide-1
Molekụla Formula: C24H38N8O6S
Molekụla arọ: 566,678 g / mol
Ngwa: Hair ibu, na-eguzogide ọgwụ ntutu
Anyị mesie ibu na ewebata ọhụrụ ibu n'ime ahịa kwa afọ maka Oke Nhọrọ maka Biotinoyl Tripeptide-1 / biotin-ghk / 299157-54-3 N'ihi Hair Uto, anyị nwere ugbu a ọkà ngwaahịa ihe ọmụma na ọgaranya ahụmahụ na n'ichepụta. Anyị na-ahụkarị na-eche gị rụzuru bụ anyị ụlọ ọrụ!
Anyị mesie ibu na ewebata ọhụrụ ibu n'ime ahịa kwa afọ maka Biotinoyl Tripeptide-1, Biotin-ghk, 299157-54-3, Ugbu a, anyị na-professionally ọnọde ahịa na anyị isi ngwọta na anyị azụmahịa bụ bụghị naanị "ịzụta" na " ere ", ma na-elekwasị anya na ihe ndị ọzọ. Anyị nwaa-gi na-eguzosi ike n'ihe soplaya na ogologo okwu cooperator na China. Ugbu a, Anyị na-atụ na-enyi gị.